လူ = ရေ | ကြယ်ရောင်မှတ်စု
Posted by ကြယ်ရောင်မှတ်စု at Saturday, February 19, 2011
ဖိုးကြယ်လေးရ....ကန်ကဘာနဲ့တူရမှာတုန်း...တို့ရှာသမျှ သွားစုနေတဲ့ ဟိုဌာန
မပြင်နိုင်လောက်အောင် ဘယ်နေရာတွေမှာများ အရှုံးပေါ်သွားပါလိမ့်??? ဒါမှမဟုတ် နိုင်ငံခြားမှာအနေကြာတော့ မြန်မာစာလုံးပေါင်းအမှန်တွေကိုများမေ့သွားတာလား??
ဒါမှမဟုတ်...သူတို့ဆိုင်မှာ အင်္ဂလိပ်စာ “TRADE SECTION” ရဲ့ အဓိပ္ပာယ်ကပဲ ကိုယ်မသိတဲ့ “ကန်သွယ်ရေ” ဆိုတဲ့ အဓိပ္ပာယ်များရှိနေတာလား??? ဒါမှမဟုတ် ဆိုင်က ၀န်ထမ်းတွေကပဲ မျက်စိမကောင်းကြတော့တာလား...လား...လား....
“ကိုဖိုးကြယ် ကျနော်တို့နဲ့ခဏလိုက်ခဲ့ပါ....” လို့ ဖြစ်နေမယ်နော်....သတိထား သတိထား....ဟဲဟဲ
ဘယ့်နှာက ဘယ်လို ကန်ထဲက ရေတွေ ခပ်ထုတ်နေရတာတုန်း
ဟ ဟ ကန်က ဘာနဲ့ တူလဲ ဖိုးကျယ်ရ... နဲနဲလောက်လဲ လင်းစမ်းပါဦး။ တကယ်မသိလို့ မေးတာနော်...
ရေဆိုတာ ကန်ထဲကို စီးသွားပြီးရင် ပျောက်ကုန်တယ်လေ
ဘယ်ကိုမှ ပြန်မစီးတော့ဘူး ကန်ကြီးထဲမှာဘဲသိမ်းထားလိုက်တော့တာ
ကန်ထဲသွယ်တဲ့ရေဟာ ပြန်ထွက်ရိုးထုံးစံ မရှိဘူးတဲ့
တော်သေးတာပေါ့ ကြွက်တွင်းလို့ မရေးထားတာ။
အဲတာကြောင့် ခုတလော နောင်တတွေနဲ့အတူတူ နိစ္စဓူဝတွေကို ဖြတ်သန်းနေတယ်.......ဆိုတာ..။